Iindaba-Inkqubo yeWeld Welding Intro
I-SMAW (i-Shielded Metal Arc Welding) ihlala ibizwa ngokuba yi-welding stick. Ngenye yeenkqubo ezithandwayo ze-welding ezisetyenziswayo namhlanje. Ukuthandwa kwayo kungenxa yokuguquguquka kwenkqubo kunye nokulula kunye nexabiso eliphantsi lezixhobo kunye nokusebenza. I-SMAW ihlala isetyenziswa ngezinto ezinje ngentsimbi ethambileyo, intsimbi ebunjiweyo, kunye nentsimbi engenasici.
Isebenza njani i-Welding Welding
Intonga ukuwelda yinkqubo iwelding arc ngesandla. Ifuna i-elektrode esetyenziswayo edityaniswe ngumsinga ukubeka i-weld, kwaye umbane usetyenziselwa ukwenza i-arc yombane phakathi kwe-electrode kunye nesinyithi esidityaniswe kunye. Umbane unokuba ngumjikelo otshintshayo okanye othe ngqo ngqo ukusuka kumbane wokuwelda.
Ngelixa i-weld ibekwa, i-electrode's flux coating iyaqhekeka. Oku kuvelisa umphunga obonelela ngegesi yokukhusela kunye nogaleko lwe-slag. Zombini igesi kunye ne-slag zikhusela iphuli ye-weld kungcoliseko lomoya. I-flux ikwasebenza ukongeza ii-scavenger, i-deoxidizers, kunye nezinto zokudibanisa isinyithi.
Ii-Electrode eziFakwe iFlux
Unokufumana ii-electrode ezifakwe umbane kwiidayimitha ezahlukeneyo kunye nobude. Ngokwesiqhelo, xa ukhetha i-electrode, ufuna ukuthelekisa iipropathi ze-electrode nezinto ezisisiseko. Iindidi ze-electrode ezifakwe i-Flux ziquka ubhedu, i-aluminium bronze, isinyithi esincinci, isinyithi esingenasici kunye ne-nickel.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kweWeld Welding
I-SMAW ithandwa kakhulu kwihlabathi liphela kangangokuba ilawula ezinye iinkqubo ze-welding kwishishini lokulungisa kunye nolondolozo. Iyaqhubeka nokusetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lwamashishini kunye nokwakhiwa kwezakhiwo zentsimbi, nangona i-welding arc-cored arc ifumana ukuthandwa kwezi ndawo.
Olunye uphawu lweWeld Welding
Ezinye iimpawu ze-Shielded Metal Arc Welding zibandakanya:
Inika konke ukuguquguquka kwesikhundla
Ayikhathalelanga kakhulu umoya kunye noyilo
Umgangatho kunye nokubonakala kwe-weld kuyahluka ngokobuchule bokusebenza
Ihlala ikwazi ukuvelisa iindidi ezine zamalungu adityanisiweyo: ilunga lempundu, ilaphu elihlangeneyo, idibeneyo yeT kunye neflet weld